Daawo Khudbadii Guddoomiyaha Guddiga Maxada banaan ee Doorashooyinka Qaranka Xaliima Ismaaciil Ibraahim (Xaliima Yarey) | XORRIYA NEWS
Home Aqoon Guud Daawo Khudbadii Guddoomiyaha Guddiga Maxada banaan ee Doorashooyinka Qaranka Xaliima Ismaaciil Ibraahim...
Daawo Khudbadii Guddoomiyaha Guddiga Maxada banaan ee Doorashooyinka Qaranka Xaliima Ismaaciil Ibraahim (Xaliima Yarey)
Guddoomiyaha Guddiga Maxada banaan ee Doorashooyinka Qaranka Xaliima Ismaaciil Ibraahim (Xaliima Yarey) oo maanta khudbad la sugaayay ka jeedisay fadhi uu lahaa baarlamanka Soomaaliya ayaa ka hadashay doorashada la filayo in ay ka qabsoonto Soomaaliya.
Xaliima Yarey ayaa soo bandhigtay laba hab oo ay sheegtay in doorashadu ay ku qabsoomi karto oo kala ah habka diwaangelinta casriga ah ee biometric iyo habka diiwaan-gelinta gacanta.
Waxa ay sheegtay in habka koowaad ee diiwaan-gelinta casriga ah haddii la qaato ay Guddiga Madaxa Banaan ee Doorashooyinku u baahan yahay ilaa 13 bilood oo ka bilaabaneysa July 2020-ka ilaa August 2021-ka, si ay doorashada baarlamaanku u qabsoonto bisha August ee 2021-ka. Habkan ayay sheegtay inuu u baahan yahay qarash badan iyo waqti dheeri ah.
“Doorashada Soomaaliya ma qabsoomeyso waqtigii loogu talo-galay. Sidaas darteed, waxaan u baahannahay 13 bilood gudahood oo ka bilaabaneysa July 2020-ka kuna dhamaaneysa August 2021-ka,” ayay Xaliimo Yarey ka sheegtay fadhiga baarlamaanka.
Xaliimo Yarey ayaa sheegtay in habka labaad oo ah habka diwaan-gelinta gacanta uu yahay mid ka waqti iyo qarashba yar habka koowaad. Habkan ayaa haddii la qaato waxa uu guddiga doorashadu u baahnaan doonaa muddo 9 bilood oo dheeri ah oo ka bilaabaneysa July 2020-ka illaa March 20221-ka.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa muddo xileedkiisu waxa uu ku egyahay bisha October ee sanadkan, halka kan madaxweynuhuna uu dhamaanayo bisha February ee sanadka dambe.
Halkan ka daawo khudbaddii Gudoomiyaha Guddiga Madaxa Banaan ee Doorashooyinka Soomaaliya.